Akhri:Dalada SSE oo Warsaxaafadee Ka Soo Saartay Shirka Jabuuti ka dhacay ee Qadiyada Somaliland Lagu Weeraray |
Akhri:Dalada SSE oo Warsaxaafadee Ka Soo Saartay Shirka Jabuuti ka dhacay ee Qadiyada Somaliland Lagu Weeraray
Tixraac: SSE/DK- 081/20122018
Shirka Machadka Heritage uu ku qabtey Dalka Jabuuti iyo kuwa la mid ahba dan uma ahayn, umuna ahaanayaan Jamhuuriyadda Somaliland
Dallada kulmisa Ururada Somaliland ee Yurub (SSE) waxy si dhow isha ugu haysaa dhaqdhaqaaqyada ay gudaha iyo dibedda ka wadaan kuwa ka soo horjeeda Qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland. Waxay dalladdu aad ula socotaa cadowga ku soo gabbanaya magacyada ururrada bulshada iyo Mac-hadyada cilmi-baadhista sheegta inay madax bannaan yihiin ama dhexdhexaad yihiin. Iyadoo mawqifkeedaasi ilaalinta qarannimada ku hawlan, waxay Dalladu daba-gal ku samaysay hagar daamooyinka Mac-hadka Heritage Institute uu ku hayo JSL (Jamhuuriyada Somaliland). Ma aha markii ugu horreysay ee Mahadkani u dhexgalay arrimaha wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya oo 2013kii markii la aasaasay oo uu ka faalooday wadahadalaas, wuxuu noo muujiyay in uu lid ku yahay qaranamida iyo jiritaanka Somaliland, waxaanan faaladooda ka soo saarnay 16kii May 2013kii Bayaan faahfaahsan. Sidoo kale masuulka Machadka Heritage wuxuu Somaliland keeney mashruuc la yidhaahdo Fursad fund mashruucaas oo dhalinyarada reer Somaliland Muqdisho loogu dirayo ,dalada SSE waxay ka dacweysey dawlada Somaliland mashruucaana waa la xidhey waana laga mabnuucey Somaliland.
Waxaa nasiib daro ah in Shirkan bishan Diisambar 14-18keedii 2018 Machadku ku qabtay Jabuuti, oo la yidhi waxa uu ku saabsanyahay isbedalada ka socda Geeska Africa, ayna si mug leh xukuumada Soomaliya iyo xubno Baarlamaankeeda ka qaybqaateen, ayaa si aan la filleyn uga xaadireen shirkaas muwaadiniin Jamuuriyadda Somaliland ahi oo loo hanweynaa. Waxaa sidoo kale halkaa ka muuqday aqoonyahano u ololeeya mab-da’a Soomaali Weyn, iyo dad geed dheer iyo mid gaaban muddo dheerba u fuulay carqaladeynta madaxbanaanida Jamhuuriyada Somaliland.
Jamhuuriyadda Somaliland oo leh Madax iyo Baarlamaan la soo doortay ma ay ka qaybqaadan shirkan ama kulankan lagu qabtey Jabuuti. Arrimaha la xidhiidha wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya Xukuumada ayey ummada Somaliland u igmatay. Arrimaha masiiriga ahi wuxuu u yaallaa oo keli ah cidda dastuurka iyo xeerarka dalku u banneeyay. Wixii intaa dhaafsiisan waxay abuureysaa fawdo iyo kala dambeyn la’aan.
Aqoonyahanka iyo ururada bulshada Somaliland waxa ku waajib ah inay ka digtoonaadaan hagardaamooyinka ay wadaan hay’adaha Soomaliya ka soo jeedaa oo ay ka mid yihiin Heritage Institute. Dalladu waxay ugu baaqaysaa hay’adaha kala duwan ee dawlada, ururada guud ee bulshada, kuwa aqoonyahanka, kuwa dhalinyarada, kuwa dumarka iyo guud ahaan shicibka reer Somaliland inay ka digtoonaadaan qorshayaasha lagu wiiqayo qaranka Somaliland isla markaana ay ixtiraamaan doonista dadka reer Somaliland oo ah sidii loo gaadhi lahaa himilada Qaran Somaliland oo dunida laga aqoonsanyahay.
Allah ayaa mahad leh,